Fivavahana ao India - Wikipedia
Ny fivavahana ao India dia ireo fivavahana maro isan-karazany izay samy manana ny fombafombany sy ny finoany. Tao India no nipoiran'ny hindoisma, ny bodisma, ny jainisma ary ny sikisma. Nandray hatry ny ela ny jodaisma, ny kristianisma, ny finoana silamo ary ny zôrôastrisma koa izy. Matetika nandray anjara lehibe ny fivavahana teo amin' ny tantaran' i India, ary eken' ny lalàna indiana ny fisian' izy ireo. Ny ankabetsahan' ny Indiana dia mpivavaka ary ny fivavahana dia mandray anjara betsaka amin' ny fiainan' izy ireo.
1 Ireo fivavahana nipoitra avy ao India
1.1 Ny hindoisma
1.2 Ny bodisma
1.3 Ny jainisma
1.4 Ny sikisma
2 Ireo fivavahana niditra avy ety ivelany
2.1 Ny jodaisma
2.2 Ny kristianisma
2.3 Ny finoana silamo
2.4 Ny zôrôastrisma
Ireo fivavahana nipoitra avy ao IndiaModifier
Mety tao amin' ireo zavatra nandrafitra ny finoan' ny vahoaka nandritra ny sivilizasionan' i Indosy, izay nisy teo anelanelan' ny taona 3300 sy 1700 tal. J.K., ny hindoisma. Ny hindoisma dia fivavahana sy filôzôfia ary fomba fiainana nipoitra ao amin' ny Zana-kôntinenta Indiana. Isan' ireo fivavahana tranainy indrindra eran' izao tontolo izao izay mbola misy manaraka izy. Ny ankamaroan' ny Hindoa dia mino ny fahefan' ireo boky atao hoe Veda. Mampiavaka ny hindoisma ny toetrany izay ahitana fanambarana karazana finoana sy fanao avy amin' ny fivavahana samihafa (sinkretisma). Tamin' ny taona 2011 dia nisy mpino hindo miisa 966 000 000 tao India, ka 79,9 %n' ny mponina izany.
Ny bodisma dia nipoitra avy tao India tamin' ny taonjato faha-5 tal. J.K. noho ny fifohazana ara-panahin' i Siddhartha Gautama sy ny fielezan' ny fampianarany. Fitambarana fanao misandrahaka ny bodisma ka hita ao ny fandinihana lalina, ny vavaka, ny fanatitra, ny fitandremana ara-pitondrantena, ny hevitra ara-psikôlôjia sy ara-pilôzôfia; ny fampianarana momba ny fahaterahan' izao rehetra izao. Azo heverina ho fivavahana tsy manana andriamanitra mpamorona ny bodisma; satria tsy misy firesahana momba izany ao amin' ny ankamaroan' ny sampan' ny bodisma. Misy mpino bodista miisa 8 400 000 (0,7 %) ny ao India.
Ny jainisma dia fivavahana izay mampianatra fa ny tanjon' ny fiainana dia mitovy ho an' ny hindoisma sy ny bodisma ary ny sikisma. Tamin' ny andron' i Mahâvîra no tena nielezan' ny jainisma tao India. Mandala ny fisainanana tsy misy herisetra (ahimsa) ny jainisma. Amin' ny jainisma dia mifampiakina ny zava-manana aina rehetra ka tokony hifanampy. Misy mpino jaina miisa 4 400 000 (0,4 %) ny ao India.
Ny sikisma dia fivavahana amin' Andriamanitra tokana naorin' ny Guru Nanak tao amin' ny tapany avaratr' i India tamin' ny taonjato faha-15. Mino ny Siky fa Andriamanitra dia tsy manam-petra, mandrakizay, mpamorona, anton' ny anton-javatra rehetra, tsy manam-pahavalo, tsy misy fankahalana, izay sady ato amin' izao tontolo izao no ao ivelany sy mihoatra azy (mihoa-draha). Tsy manohitra ny fivavahana hafa toy ny kristianisma sy ny finoana silamo ary ny hindoisma ny sikisma fa mihevitra azy ireo ho fomba samy ahafahana mivavaka amin' Andriamanitra. Misy mpino siky miisa 20 800 000 (1,7 %) ny ao India.
Ireo fivavahana niditra avy ety ivelanyModifier
Efa tany amin' ny Andro Taloha no nahitana Jiosy mpifindra monina tany India ka isan' ireo fivavahana avy ivelany niditra tao India ny jodaisma. Latsaky ny 20 000 ny mpino manaraka ny jodaisma ao India.
Ny kristianisma dia lazain' ny lovantsofina fa nentin' ny apôstôly Tômasy (na Tômà) tao India tamin' ny taonjato voalohany. Izy no fivavahana avy any ivelany tonga voalohany tao India. Ireo zanaka am-pielezana jiosy tao Kerala no nandray ny fivavahana kristiana voalohany tao India alohan' ny hielezany tamin' ireo Indiana. Ankehitriny dia hita ao India ny katôlisisma, ny kristianisma ôrtôdôksa, ny prôtestantisma, ny batisma ary ireo fiangonana tatsinanana. Misy Kristana miisa 27 800 000 (2,3 %) ny ao India.
Ny finoana silamoModifier
Efa tany amin' ny taonjato faha-7 tany no nampisy ny finoana silamo tany India izay nentin' ireo arabo mpivarotra, nefa taorian' ny fakan' ny Miozolmàna ireo tany India no nampiely azy indrindra. Maro ireo Dalita (saranga farany ambany araka ny hindoisma) izay niova finoana ho silamo tamin' ny andron' ny Empira Môngôly, teo anelanelan' ny taona 1526 sy 1858. Misy mpino silamo miisa 172 000 000 (14,2 %) ny ao India ka firenena laharana fahatelo izy amin' izany ao aorian' i Indônezia sy i Pakistàna.
Ny zôrôastrisma dia efa nisy tao India tamin' ny vanimpotoana sasanida. Nifindra monina tao India nanao andiany mifanesy ny Zôrôastriana nandritra ny vanimpotoana silamo, taorian' ny fakàn' ny Miozolmàna an' i Persia, raha nihen-danja ny fivavahany tao Iràna sy tamin' ny firenena hafa noho ny fanenjehana. Tamin' ny vanimpotoana safavida koa dia nisy fifindrà-monina. Ao India, ankehitriny, no ahitana Zôrôastriana betsaka indrindra. Ankehitriny dia miisa 61 000 ny Zôrôastriana parsy ao India.
↑ 1,0 1,1 et 1,2 Laurent Marchand, « Inde : 966 Millions d'Hindous, 172 M de Musulman, 27 M de Chrétiens » [tahiry], sur Ouest-France, 1er septembre 2015 (consulté le 28 janvier 2016).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fivavahana_ao_India&oldid=1038999"
Dernière modification le 16 Oktobra 2021, à 15:57
Voaova farany tamin'ny 16 Oktobra 2021 amin'ny 15:57 ity pejy ity.